DOSBox yeLinux; dzidza maitiro ekuisa nekuishandisa muLinux | Linux Vakapindwa muropa
DOSBox: Maitiro Ekumhanyisa Yekare DOS Zvishandiso paLinux
DOSBox Ndicho DOS emulator iyo ine shanduro dzeLinux, FreeBSD, Mac OS X, Windows, nezvimwe. Iyo emulator inovavarira kuumba yakakodzera nharaunda kuitira kuti yekare DOS kunyorera uye mitambo inogona kuramba ichishandiswa muneazvino mashandiro masystem pasina kuenderana matambudziko.
Nekuda kwekuda kwangu microprocessors, dzimwe nguva ndanga ndichida chirongwa chinonzi MICRO mushanduro ye MS-DOS uye ini ndamhanya kupinda muchinetso ndichida kuchimhanya. DOSBox yakandibhadharisa uye ikozvino ndinotsanangura kuti sei.
Yokutanga ndeye isai, zvekugoverwa kwakavakirwa paDebian, unogona kushandisa mutsara unotevera, kune iwo akavakirwa paRPM mapakeji kana vamwe (ye openSuSE iwe yaunokwanisa enda kune iyi link wobva wadzvanya pane yakananga Kuisa bhatani), unogona kutsvaga imwe yakakodzera nzira (kana uchida, iwe unogona zvakare kuitora kubva pawebhu. www.vanenge.com kana shandisa maturusi seAptitude):
Kamwe yaiswa, unogona kuishandisa nekumhanyisa chirongwa. DOSBox inokutendera iwe kumhanya zvirongwa kana mitambo yemavhidhiyo yeMS-DOS nekuwedzera .exe, .com uye .bat. Kana iwe uchida kuziva kuti zvinogona kuitwa sei, ingo nyora zvinotevera kuti utange.
Kamwe mukuuraya iwe unogona kushandisa DOS inoraira kufamba nayo. Iye zvino unogona kugadzira dhairekitori inonzi "mashedhiyo" mu / Kumba uye ipapo iwe unogona kusevha izvo DOS zvinogoneka zvaunoda kumhanya. Kana iyo inogoneka yatovepo, unogona kunyora zvinotevera muDOSBox (Z: \_> ndiyo DOSBox inokurumidza inoonekwa uye haufanirwe kuinyorera):
Kana zvese zvikafamba mushe, a shoko "Dhiraivha C yakaiswa senge dhairekitori renzvimbo / imba / mushandisi / yakarongedzwa" kwatiri. Aya ndiwo marongero madhairekitori maunenge mave nekuita DOS akaiswa uye akagadzirira kushandisa. Iye zvino isu tinofanirwa kuendesa chirongwa cheDOS kana mutambo watinoda kubata. Type:
Zvino izvo kukurumidza Chichava chachinja kuita C: \_> uye kana uchida kana usingayeuke mazita eanogoneka, unogona kushandisa DIR uye mimwe mirairo yeDOS kutenderera. Kana, semuenzaniso, zvinokwanisika zviri mukati meimwe subdirectory, tinogona kuenda kudhairekitori nekutaipa:
Kwedu, izvi hazvisizvo, sezvo iyo inoitwa zvakananga mune yakarongwa. Isu tinoramba tichinyora izere zita rechirongwa uye tinya ENTER, sezvazvakaitika muMS-DOS. Semuenzaniso, fungidzira kuti iwe unoda kumhanya micro.exe inowanikwa mune yakasikwa dhairekitori, wobva wanyora:
Uye mushure mekutsikirira ENTER ichavhura. Rangarira kuti variko mamwe mapfupi makiyi ekuita mamwe mashandiro mukati meDOSBox, senge Ctrl + F9 kubuda DOSBox, Alt + ENTER kugadzirisa iyo yakazara skrini mode, Ctrl + F5 kutora skrini uye Ctrl + F10 kuburitsa mbeva kana kuibata kuti ubate iyo DOS application. Kune zvakawanda, iwe unogona kubvunza iyo DOSBox bhuku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » DOSBox: Maitiro Ekumhanyisa Yekare DOS Zvishandiso paLinux
uye chii chakanga chiri kuita micro? Ini ndaive ndasara nekukahadzika XD kwaziso
Mhoro. Micro ndeye Motorola 6800 microprocessor emulator.Iine maturusi akasiyana anoita semudzidzisi kuziva maitiro ekubata mirairo, mashandiro ayo mukati, ma IRQ, kuigadzira, nezvimwe.
Pindura kune axi85
grax, pandakangoronga iyo 6800 pandakanga ndichifunda zvemagetsi, ini handina kana kuzorangarira futi, ndatenda nemupiro. Kwaziso
jhon cheni akadaro
Mhoroi, ini ndoda kushandisa chirongwa kutaura neplc, chirongwa ichi chinonzi logic master 90, chinovhura nezvose asi kana uchida kuvhura kana kuona zviri mukati meplc panowanikwa kutaurirana, ndingaite sei kuti ndigadzirise izvozvo? iwe unoshandisa linux mint
Pindura kune jhon cheni
Mhoro, wakadii iwe? Ini ndoda kushandisa chirongwa chiri chekutaurirana neiyo plc, chirongwa ichi logicmaster 90, inovhura asi kana ndichiedza kuvhura zviri mukati meplc ndinowana yekutaurirana kutadza meseji, ndogadzirisa sei kutaurirana Ndatenda… Ini ndinoshandisa linux mint 17.3
Mhoroi, ndinoziva kuti yave nguva yakareba kubvira pakaburitswa ichi posvo, asi ndinofanira kukubvunza mubvunzo. Ini ndinofanirwa kuisa yangu DOSBox C drive nekuiisa pane USB diski, asi sezvo iine zita rine mabara haina kunditora. Chero ani anoziva kuti gomo rairo rinogona kunyorwa sei mu dosbox ye linux kukwirisa iyo USB drive se diski C:? Ndatenda
yakapusa kunzwisisa. Ndatenda!
mr ef akadaro
Sezvo ini ndichiisa iyo yakapetwa poindi (:).
Pindura Mr. Ef
Unoisa sei iyo iyo mbiri poindi (:)?
google-translate-ehl: Google Dudziro mune yako terminal